🥇 ukuhlaziywa komsebenzi ngezicelo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 530
Ividiyo yokuhlaziywa komsebenzi nezicelo
Oda ukuhlaziywa komsebenzi ngezicelo
Ukuhlaziywa komsebenzi ngezicelo kumele kwenziwe ngendlela efanele. Ukuze wenze kahle lolu hlobo lomsebenzi wokukhiqiza, kuyadingeka ukusebenzisa umkhiqizo wekhwalithi ephezulu. Uhlelo olunjalo luyakhiwa futhi lunikezwe kumakhasimende ngohlelo lwe-USU Software. Ngosizo lwenkimbinkimbi, kungenzeka ukubandakanyeka ekuhlaziyweni kobungcweti futhi ulethe umsebenzi ezikhundleni ezintsha ngokuphelele. Isikhalazo sicutshungulwa ngesikhathi sokurekhoda, okusho ukuthi ibhizinisi liyakhuphuka ngokushesha. Kukhona ithuba lokukhulisa ngokuphawulekayo ivolumu yemali engenayo, ngenxa yalokho inkampani ehola emakethe, ikhulisa kancane kancane igebe elivela kubancintisana abakhulu. Hlaziya kahle ukuze kungabikho maphutha enzeka ekuphumeni kokuqaliswa kwayo, futhi inkampani izokwazi ukuhlanganisa isikhundla sayo emakethe njengomholi ongangabazeki ophethe noma yiziphi izimbangi, ethola inani elikhulu lezinzuzo ezibonakalayo kulokhu.
Lapho uhlinzeka ngokuhlaziywa komsebenzi wezicelo, awekho amaphutha azokwenziwa, ngenxa yokuthi inkampani ikwazi ukuqhubekela phambili empikiswaneni yokuncintisana futhi ithole indawo kulezo zikhundla eziletha inani elikhulu lemali ethokozisayo ekuphathweni kwebhizinisi. Lapho wenza ukuhlaziywa komsebenzi ngezicelo, isoftware iyasiza, ngoba le software yakhelwe ukuhlinzeka abasebenzi ngosizo lwekhwalithi ephezulu. Ubungoti bochwepheshe buqala ukukhula, okusho ukuthi bayakwazi ukwenza imisebenzi ephuthumayo kakhulu. Ngenxa yalokhu, kungenzeka ukonga izinsizakusebenza zezezimali futhi uzisebenzise ngendlela ezuzisa kakhulu ibhizinisi. Isakhiwo sokusebenza ngokuhlaziywa kwezingcingo singavivinywa mahhala ngokulanda inguqulo yedemo. Ukuze wenze lokhu, udinga nje ukuya kungosi esemthethweni yohlelo lwe-USU Software. Kulesi siza kuphela kunezixhumanisi zabo ezingasetshenziswa ukulanda imikhiqizo.
Ukuhlaziywa kufanele kunakwe ngokufanele, umsebenzi kufanele wenziwe ngokomsebenzi. Le ukuphela kwendlela yokwenza ngcono isithunzi sebhizinisi nokuletha inkampani ezingeni elisha ngokuphelele lobuchwepheshe. Imilayezo nayo idinga ukunikezwa inani lokunakwa elidingekayo. Inkampani uqobo ikwazi ukudweba imithethonqubo, eholwa yiyo, iza empumelelweni. Imininingwane ukhiye kuyo yonke iminyango, futhi ukutholakala kwayo kunikeza inzuzo ebalulekile yokuncintisana. Ngenxa yokutholakala kwemibiko, kungenzeka ukhethe lezo zinketho zesenzo ezamukelekayo kakhulu. Kumele kuqashelwe ukuthi isoftware ibikezela ngokuzimela izimo ezisebenzisa ukusebenza. Kuyinto elula futhi esebenzayo, okusho ukuthi ukufakwa kwalo mkhiqizo we-elekthronikhi akufanele neze kunganakwa. Uhlelo lokusebenza lokuhlaziywa kwezicelo oluvela ohlelweni lwe-USU Software luzoba ithuluzi elingenakubuyiselwa endaweni kagesi. Ngosizo lwayo, kuzokwenziwa umsebenzi wangempela wasehhovisi.
Ochwepheshe bethu bahlala bekulungele ukuhlinzeka ngosizo olusezingeni eliphakeme lobuchwepheshe kulabo bantu abathenga isoftware ngohlobo lwelayisense. Umkhiqizo wethu unikezwa ngemibandela evumayo, okusho ukuthi ukuhlaziywa komsebenzi ngezikhalazo kungenziwa ngokomsebenzi. Isixazululo esiyinkimbinkimbi sinaso isheduli, okuyisici sobuhlakani bokufakelwa obukwazi ukulungisa ukungalungi okwenziwa ngabasebenzi. Abaphathi bayakwazi ukusebenza ngeqoqo lamabhulokhi wolwazi alidingayo. Ngasikhathi sinye, ukuvikela ubuhloli bezimboni, imininingwane yefomethi yamanje ingavinjelwa ekufinyeleleni kochwepheshe abajwayelekile. Lokhu kulula kakhulu njengoba ivuma inkampani ukuthola imiphumela esheshayo emncintiswaneni. Ukwenza isipele imininingwane kuzenzakalelayo futhi kungenye yezinketho ezinikezwe ekuhlaziyweni komsebenzi ngezicelo. Izikhumbuzi zokuvakasha ezizenzakalelayo futhi zibenze bakwazi ukuthola imiphumela ngokushesha.
Izidingo zohlelo lwalo mkhiqizo zehlisiwe ukuze ukwazi ukusebenza kunoma iyiphi ikhompyutha yomuntu siqu engasebenziseka. Kuzokwazi ngisho nokugwema ukumiswa okwesikhashana kokusebenza futhi ngaleyo ndlela kuqinisekiswe inkampani isikhundla esiphakeme. Isoftware yokuhlaziywa komsebenzi nezicelo ezivela ku-USU Software izokusiza ukuthi ungaphuthelwa yinzuzo futhi ngaleyo ndlela wandise inani lemali engenayo yesabelomali. Uma ulwela ukuthola isikhundla esiphambili kumagazini iForbes, bese ufaka uhlelo lwethu. Izovumela inkampani ukuthi izuze ngokushesha imiphumela ebingaziwa ngaphambili. Lokhu kwenzeka ngenxa yokusebenza okuzenzakalelayo kwenqubo yomsebenzi wasehhovisi, futhi lokhu kukhombisa kahle kakhulu impumelelo yebhizinisi esikhathini eside esizayo. Isakhiwo sokuhlaziya umsebenzi nezicelo ezivela kuphrojekthi ye-USU Software sizoba umsizi we-elekthronikhi ongashintsheki wenkampani, ngaphandle kwayo okuzoba nzima ukukwenza ngaphandle kwayo. Ngemuva kwakho konke, uzothatha umthwalo omningi onzima, futhi abasebenzi bazokwazi ukugxila ekusetshenzisweni kwemisebenzi efanele yehhovisi.
Isixazululo sesimanje esihlanganisiwe sokusebenza nokuhlaziywa kwezingcingo kusuka kusistimu ye-USU Software senza sikwazi ukusebenza ngemephu yomhlaba, lapho izindawo ezihambisanayo zimakwe khona. Lokhu kulula kakhulu njengoba kwenza ukuhlaziywa okusebenzayo esikalini somhlaba jikelele. Amakhasimende, osonkontileka, izimbangi, nanoma yiziphi ezinye izindawo zingamakwa ebalazweni. Injini yokusesha ingathola noma yiluphi ulwazi ngoba ungasetha amapharamitha nemigomo yokusebenza usebenzisa iqoqo lezihlungi. Isoftware yanamuhla yokuhlaziywa komsebenzi nezicelo idalwe ngabachwepheshe bohlelo lwe-USU Software besebenzisa ikhwalithi ephezulu kakhulu nobuchwepheshe obuthuthukile.
Izixazululo zobuchwepheshe zithengwa yiqembu le-USU Software emazweni angaphandle futhi zishintshelwa ukudala isisekelo sezicelo zesoftware jikelele. Ukuba khona kwesisekelo esisodwa kwenza ukuthi kube nokwenzeka ukunciphisa izindleko zezicelo, futhi ngaleyo ndlela kunikeze ithuba lokunciphisa izindleko zezicelo eziphelele kumthengi, okulusizo olukhulu kubo. Sihlala sisebenza nezithameli ezihlosiwe futhi siqoqa impendulo kulabo bantu nezinkampani ezithenge ukuthuthukiswa kwezicelo zethu. Ngaso sonke isikhathi ongoti be-USU Software benza ukuhlaziywa kwezibalo eziqoqiwe bese kuthi, uma kunesidingo, benze izinguquko ohlelweni lokuhlaziya ukuze ikwazi ukubhekana nemisebenzi eyabelwe yona kangcono kakhulu. Uhlelo lokuhlaziywa komsebenzi luba ithuluzi eliphakeme kakhulu elingenakubuyiselwa enkampanini yesitholi, ngosizo lwayo noma yimiphi imisebenzi yasemahhovisi exazululwa kalula nangempumelelo. Izithonjana zolwazi eziboniswe emephini, nangaphakathi kwamakhadi abo zibonisa isimo sangempela sesici esikhethiwe.
Umsebenzi wokuhlaziywa kwezicelo ezingeni lobuchwepheshe usebenzisa uhlelo lokusebenza oluvela ohlelweni lwe-USU Software. Uma umsebenzisi echofoza kabili ku-manipulator yekhompyutha, eyikhomba ekhadini leklayenti, lapho-ke ungathola imininingwane egcwele mayelana ne-akhawunti ekhethiwe.
Imephu ingalandwa futhi lapho kukhona uxhumano lwe-Intanethi olubuthakathaka, iboniswa ngaphandle kwezinkinga, ngoba isicelo sesicelo sifinyelela ku-hard drive yekhompyutha yomuntu siqu. Ukuncika kusisetshenziswa sabasebenzi kuncishisiwe njengoba kungenzeka ukusabalalisa kabusha imisebenzi enzima kunazo zonke yezicelo endaweni yomsebenzi we-software wokuhlaziywa komsebenzi nezicelo. Gcwalisa izindawo ezingenalutho ebalazweni bese uqhudelana nabaphikisi bakho, ubadlule futhi uhlanganise izikhundla zakho njengomholi. Vula ukuboniswa kwamakhasimende nezicelo ebalazweni lomhlaba usebenzisa izicelo zethu zomkhiqizo we-elekthronikhi. Isoftware yokusebenza nokuhlaziywa kwezicelo kusuka kusistimu ye-USU Software ivumela ukuhlukahluka kwemibala yezicelo zokuhlukanisa kangcono isimo sezicelo zabo zamanje. Isimo semakethe sicacisa kumthengi, futhi sikwazi ukwenza izinqumo eziqinisekiswe kakhulu zokuphatha, eziqinisekisa ukubusa okuphumelelayo kwenkampani. Uhlelo lokuhlaziywa kwezicelo luba umkhiqizo wokusungulwa kwesitholi okuletha ibhizinisi ezingeni elisha ngokuphelele lobuchwepheshe.